Jan 1, 2013 – HlaMin
Thanks to all the readers — mostly silent but occasionally appreciative.
Since I wasaSaya, but not at RIT, I was not as busy as my classmates who were RIT sayas attending SPZPs once or twiceaday. Some alums (e.g. class of 70 and 71, Mech 72, Civil 75) invited me as guest to their class reunions and/or SPZPs. Thanks.
My classmates (from the the class of 69++) hadagrand reunion lunch, where Ko Aung Min madearoll call of the GBNF before being entertained to food, drinks, welcome addresses, songs and dances. Thanks. Please read Ko Aung Min’s e-mail.
U Aung Min (Mech 69) wrote :
Dear All 69++er Classmates,
Today, ( 31 December, 2012 ) we RIT 1969++ classmates heldagrand re-union lunch successfully.
About 90 classmates including about 8 ladies join the re-union, from abroad and in land.
Although we sold the lunch tickets @ 10000 Kyats per head, KO TIN WIN (Mining) took this opportunity of the re-reunion and hosted the lunch, including food and soft drink and two liters of Black Label Whiskey.
So, almost all the cash, sold amount, will be transferred to the Health Care Fund
Ko Kyaw Zin also brought one liter of Chivas.
Danny, Albert, Saw Law La Htwe are good vocalists at the ceremony.
Saya U Moe Aung (Tekkatho Moe War) wrote :
စာရေးသူတို့စင်ကာပူမှ ရန်ကုန် World-wide RIT ဆရာပူဇော်ပွဲ သို့
လာရောက်ဖျော်ဖြေသော နာမည်ရ စွယ်တော်ရိပ် အငြိမ့်..။
မနေ့ည ဒီဇင်ဘာ ၃၀ ရက် MCC (မင်းဓမ္မ လမ်း၊ ရန်ကုန်) ၀င်း ကွင်းပြင်ကျယ်၌
ညစာစားပွဲ ကျင်းပခဲ့သည်။ ဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ် ကို ကိုသန်းပိုက
ဦးဆောင်သည်။ အစ ပထမတော့ ကြိုတင်ရေးဆွဲ ဆုံးဖြတ်ထားသည့် အတိုင်း
ချောချောမောမော…၊ အချိန်ကလည်းအံကိုက်။ ကွက်တိ။ နောက်တော့
စည်းကမ်းဖေါက်လာသည်။ အစီအစဉ်၌ မပါသူတွေက အတင်းဝင်လာပြီး သူလည်းဆိုမည်..၊
ငါလည်းဆိုမည်…၊နိုင်ငံခြားကလာသည့်  တစ်ဖွဲ့  ကလည်း ပါချင် ကချင်…။
ရုပ်သေး ကလည်း အချိန်တော်တော်စားသွားဧ။်။RIT ကျောင်းသားပွဲနှင့်
ဘာမှမဆိုင်…။အချိန်က မှန်းထားသည့် အတိုင်းဖြစ်မလာတော့…။
စွယ်တော်ရိပ်အငြိမ့် ထွက်တော့ ပရိသတ်က တစ်ဝက်ပင်မကျန်တော့…။
၀န်ကြီး ဦးအေးမြင့်၊ ဆရာဒေါက်တာအောင်ကြီး၊ ….. နှင့် ဆရာအများစု ပြန်ကြပြီ…။
အဓိက ရေးချင်သည်မှာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းကိုမလိုက်နာပဲ အလွယ်တကူ
ဖေါက်ဖျက်ဖို့  ၀န်မလေးသောလူတစ်စုကိုကြည့် ပြီး ခေါင်းခါနေမိသည်။ ” ဗမာ
တွေ စည်းကမ်းဖေါက်လိူ့ ထီးနန်းပျောက်ခဲ့ပြီ ” ဟူသည့်  စာအဆိုတစ်ခု
ခေါင်းထဲ ၀င်လာသည်။ သေးသေးမွှားမွှား က စ စည်းကမ်းရှိမှ တော်ကာကျမည်။
အငြိမ့် လူရွှင်တော် သြဘာ ပြက်သွားသော ပြက်လုံးတစ်ခု တွင် …”
ကျွန်တော်တို့ ခုလို စားပွဲတွေ ခုံတွေကို ဖျော်ဖြေခွင့်ရတာ
” မနက်တုန်းက ဆရာတွေကို နေလှန်း ပြီး၊ ညကျတော့ လေသလပ် ထားတာ ကိုလည်း
ရှင်း ပါ မည် ။
ဆရာထဲက ဆရာတစ်ယောက် ဆိုတော့ တော်တော်သဘောကျမိသည်။ (ဘယ်သူကိုမှ
မနက်ပိုင်းနေကခြစ်ခြစ်တောက်ပူသည်။ ၀ါအရင့်ဆုံး အသက်အကြီးဆုံးဆရာတွေက
စင်မြင့်ပေါ်အရင်တက်၊ ရှေ့ ဆုံး ခုံနှစ်တန်းမှာထိုင်၊ မနက် ၉ နာရီ မှ ၁၁
နာရီထိ၊ ၁၂ နာရီလောက်မှာပြီးသည်…။ စဉ်းစားပြီး အာရုံခံစားကြည့် ….။
ည လဟာပြင်ကြီးမှာ တကယ်တော့ ပျော်စရာ…၊ Romantic လည်းဖြစ်သည်။
စားစရာကလည်း အလျှံပါယ်…၊ တဖြည်းဖြည်း ညနက်လာတော့ ကောင်းကင်ထက်က သဘော
မနော ကောင်းစွာဖြင့် နှင်းမြူပွင့်လေးများ ဖြန်းပက် သွန်းခြွေပေးသည်။
ဒါကြောင့်လည်း ဆရာကြီးတွေ ညဉ့်နက်ထိ မနေတာများလား…။
သြဘာ ရော ကျန် လူရွှင်တော်အားလုံး ကို ချီးကျူးဂုဏ်ပြုပါဧ။်။
မင်းသမီး သုံးလက်စလုံးကိုလည်း ချီးကျူး ဂုဏ်ပြုပါဧ။်။
U Wynn Htain Oo wrote :